ओमकार टाइम्स फेसबुक चलाउनु हुन्छ? फेसबुकमा आफ्नो `डाटा´ कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ? पढ्नुहोस – OMKARTIMES
फेसबुक चलाउनु हुन्छ? फेसबुकमा आफ्नो `डाटा´ कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ? पढ्नुहोस
काठमाडौ । हालै मात्र करोडौ मानिसको व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग भएको आरोप फेसबुकमाथि लागेको छ ।
जसमा व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग नगर्ने विश्वास प्रयोगकर्तालाई दिइएको थियो ।
फेसबुकमा विभिन्न किसिमका गेम, क्विज तथा प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्ने एप्सहरु हुन्छन् । जसको लक्ष्य डाटा संकलन गर्नु हुन्छ । फेसबुकमा देखिने विभिन्न किसिमका एप्स, क्विज तथा कार्याक्रम फेसबुकको नियम र शर्त अनुसार नै काम गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसमा बायो, जन्मदिन, परिवार, धार्मिक विचारधार, अनलाईन उपस्थिति, टाइमलाईनमा देखिने पोस्ट तथा अन्य गतिविधि पर्छन् । ईस्ट एंग्लिया स्कुल अफ ल विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि, वौद्धिक सम्पदा र मिडिया कानुनका लेक्चरर पल बरनलका अनुसार कुनै सर्भिस पेजमा लाइक पटन क्लिक गर्न नहुने र एदी गेम वा क्विज खेल्नु परेमा फेसबुकबाट नगरी सिधै पेसमा जानुपर्छ ।
उनी भन्छन, फेसबुकबाट लगइन गरेर क्विज वा गेम खेल्न सजिलो हुन्छ तर यसबापत आफ्नो व्यक्तिगत विवरणसम्म त्यस्ता एप्सले पहुँच राख्छन् । बीबीसीको सहयोगमा ।
२०७६ जेष्ठ १४
झापामा प्लाई उद्योगमा आगलागी, ३० लाख बढी क्षति
झापाको दुई भिन्न स्थानबाट ४८.५ ग्राम ब्राउनसुगरसहित २ पक्राउ
सम्झना हत्या प्रकरण : अस्पतालबाट भागेका राजेन्द्र जंगलमा भेटिए, तीन प्रहरी निलम्बित
पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेमाथि आक्रमण गर्ने पक्राउ